Farmaajo oo khilaaf dhex-dhigay Xawaadle iyo Abgaal | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo ayaa qorshihiisu ahaa inuu geeyo HirShabeelle Madaxweyne taageersan siyaasadiisa, oo doorashadda uga shaqeyn doono dib usoo laabashadiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farmaajo ayaa kulan kula yeeshay xafiiskiisa Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan, isagoo kala hadlay doorashooyinka maamulka HirShabeelle.
Keydmedia Online ayaa ogaatey in kulanka uu kusoo dhamaadey is-faham iyo natiijo la'aan kadib markii Farmaajo usoo bandhigay Ugaaska inuu aqbalo in sanadkan Madaxweynaha HirShabeelle laga dhigo shaqsi kasoo jeeda Abgaal.
Ugaaska ayaa gaashaanka u daruuray dalabka Farmaajo ee ah in kursiga Madaxweynaha HirShabeelle la siiyo beesha Abgaal, oo horey u lahayd xilka Madaxweyne ku-xigeenka, waxaana khilaafkan uu kusoo beegmayo xili doorashadda maamulkan la filayo inay dhacdo bisha soo socota.
Macluumaadka KON ayaa sidoo kale sheegaya in Farmaajo uu doonayo inuu ku qanciyo beesha Xawaadle kursiga gudoomiyaha Baarlamanka, iyadoo dawladda Federaalka ka shaqeynayso inay geyso HirShabeelle shaqsi taageersan siyaasadda Villa Soomaaliya.
Qorshaha Farmaajo ayaa ahaa inuu dhamaan Maamul goboleedyada geeyay Madax isaga taabacsan, wuxuuna ku guuleystay Galmudug iyo Koonfur Galbeed, balse ku adkaatey Jubbaland iyo Puntland, oo dagaal culus la galay.
HirShabeelle ayaa hadda miiska saaran, oo doorashadeeda laga hagayaa Villa Soomaaliya, oo Fahad Yaasiin iyo Farmaajo u dejiyeen hanaan doorasho oo natiijadeeda la ogyahay, iyadoo loo wado shaqsi horey loo diyaariyay oo Madaxweyne ka noqon doono.
HirShabeelle ayaa ku dhisan heshiiska awood qeybsi, oo ah in kursiga Madaxweynaha la siiyo Xawaadle, ku xigeenkana Abgaal oo sidoo kalena la siiyay Caasimadda [Jowhar], halka gudoomiyaha Baarlamanka ay helayso Gaaljecel.
Faragelinta ayaa ah waxyaabaha keenay khilaafka mudada dheer taagnaa ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Madaxda Maamul Goboleedyada, oo hadda dhawaan heshiis ka gaarey arrimaha doorashooyinka dalka, oo sidii ay rabeen u qebsadey kuraasta Baarlamanka.
0 Comments Topics: fahad yaasiin farmaajo hirshabeelle waare